Inkqubo yokubhukisha ihotele- uphononongo Ndiza kuthetha... | Интересный контент в группе Туры, отдых, курорты, отели
News FeedTopics 874Photos 7Videos 1Participants 2 223
added June 20 2020 at 18:38
Пляж Нерха Нерха - Андалусия - Испания Андалусия, безусловно, один из самых красивых регионов Европы. Представьте себе регион, включающий такие направления, как Севилья , Малага , Ронда, Марбелья, Гранада, Михас, Уэльва ... замки, необычные сады, такие как Алькасар-де-Севилья, Алькасаба в Малаге, романтические места, такие как Площадь Испании в Севилье или Цветущие аллеи Михаса. Приходите и отдохните на одном из самых красивых пляжей в Испании , на пляже Нерха (всего в 1 часе езды от аэропо
added June 20 2020 at 18:37
Пляж Пасяка Цавтат - Регион Конавле - Хорватия Самый красивый пляж в Европе расположен в самом сердце возвышенного района Конавле, в 10 минутах от Цавтата и в 30 минутах езды от жемчужины Адриатики, города Дубровника . Расположенный у подножия скалы, этот пляж - настоящее чудо. В 1955 году был создан тоннель от полей вверх по течению (часто затопленных) к морю. Оставшиеся камни использовались для строительства дорог или были оставлены на берегу моря. Через несколько лет волны превратили эт
2 223 participants in the group
Inkqubo yokubhukisha ihotele- uphononongo Ndiza kuthetha ngeendlela zokugcina xa ubhukisha ngokuBHALA. Molweni kubo bonke abahambi kunye nokunye! Igama lam ndingu Katya kwaye umyeni wam nguGenius. Unesaphulelo se-15% kwiwebhusayithi yokubhukisha. Wayebhukisha kakhulu kwindawo yokubhukisha kwaye ngoku uninzi lwamagumbi kuye alula kunabanye. Namhlanje ndiza kukuxelela ngokubhukisha kwindawo yokubhukisha. Malunga nendlela esivame ukubhukisha ngayo amagumbi. Okokuqala, ngaphambi kokubhukisha, kufuneka ubhalise, unamathisele i-imeyile yokusebenza ekubhukeni (kubalulekile ukuba ube nokulula, ukufikelela kuyo ngokulula) kwaye ucinge ngephasiwedi. Ukuba ulahlekelwe yiphasiwedi, inokubuyiselwa ngokulula. Kodwa ke ndikucebisa ukuba uqhube ngephasiwedi oya kuthi ngokuqinisekileyo uyikhumbule. Ngequbuliso, ngokukhawuleza kufuneka ufikelele kwiakhawunti yakho (kwisikhululo seenqwelomoya, ehotele). Ndihlala ndiyilibala iphasiwedi kwaye ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyibhale phantsi ephepheni. Ukubuyiswa kwegama eligqithisiweyo akulunganga kakhulu, ngakumbi ukuba i-Intanethi ayinamandla. Ndinesicelo sokubhukisha ifowuni yam, eyenza lula ubomi bam eluhambeni. Emva kokungena kwindawo kumgca wokukhangela, kuya kufuneka uqhube endaweni yohambo lwakho lwamva, imihla, inani labantu kwigumbi, ucofe iqhosha lokufumana. Ukuba unqwenela, kunokwenzeka ukucwangcisa isicoci sesidlo sakusasa, ichibi, ukunciphisa umda wegumbi (umzekelo, bonisa ukuya kwi-50 yeedola ngobusuku), inani leenkwenkwezi, ukulinganisa ngohlolo. Ngokusekelwe kumava am, ndiza kuthi ukuba ireyithingi esekwe kuhlolo kufuneka ibe ngaphezulu kune-7.0, ukuba iphantsi, ke andiyi kuyithanda ngokuqinisekileyo. Kwaye, ewe, jonga ukuzijonga ngokwazo, ukuba zibhale ntoni iindwendwe kunye nenani loqwalaselo ngokusekelwe apho umlinganiso wamkelwe. Kuya kubakho uphononongo oluninzi, ngaphezulu kwama-50-100, kwaye amareyithi angama-7.0 nangaphezulu. Xa inombolo ikhethiwe, kuya kufuneka uqhube kwinombolo yekhadi lakho lebhanki kwaye ubonise iinkcukacha, ezinje ngegama, lowo ubhukisha inombolo leyo kuye. Ukubhukisha amagumbi ehotele, ndikucebisa ukuba usebenzise amakhadi anomda wemali. Kukho amakhadi asimahla apho ungabeka khona kanye isixa esifunekayo ekubhukeni. Ndikholelwe, uya kuzola. Xa ukhetha igumbi, jonga ubukho bendlu yangasese kunye neshawari egumbini kunye namanzi ashushu. Ukuba uthandabuza, kungcono ukhethe enye inketho. Ndakhe ndafumanisa ukuba ishawa yajikelana ngaphandle kwegumbi, nangona ixabiso lelo gumbi lalilihle kakhulu. Ndikhetha ukutya isidlo sakusasa kwihotele. Ukukhangela i-cafe elambile ekuseni ukuze ube nesidlo sakusasa kubonakala kum njengethemba elinomtsalane kunokufumana isidlo sakusasa kwihotele. Ngaphezu koko, ngesizathu esithile, kubiza kakhulu esitratweni kwiindawo zokudlela xa kuthelekiswa nesidlo sakusasa esifakwe kwixabiso lekamelo. Bhukhisha igumbi kwangoko. Kwangaphambi kokuba ubhukishe, kuya kuba ngcono inani eliya kulifumana. Zonke izinto ezilungileyo zithatyathwa ngokukhawuleza. Ukuba unethamsanqa kwaye ubhukishe igumbi, uyakufumana ubungqina bokubakho ngeposi emva kokubhukisha. Ndincoma kakhulu ukuprintwa kolu hlu, njengoko rhoqo kwihotele ezibalaseleyo ufuna inombolo yokubhuka kwaye incwadana yakho yokundwendwela ayisoloko ifumana indawo yokubeka indawo. Ukongeza, unokukhetha igumbi ngokurhoxiswa simahla, akufuneki ukhathazeke ukuba iiplani ziyaguquka. Kufanelekile ukuqaphela ukuba xa ufika kwisikhululo seenqwelomoya unokucelwa ukuba ubonise isabelo sakho ehotele. Kwaye kwindiza, ukuzalisa ikhadi lokufuduka, kuya kufuneka ufake igama lehotele kunye nedilesi yalo. Ukufika kwakho ehotele, kuxhomekeka ekubeni igumbi sele lihlawulwe okanye cha, uya kuhlaziywa ngoko nangoko okanye emva kwentlawulo. Kwiimeko ezinqabileyo, intlawulo yenzeka emva kokugxothwa. Gcina zonke iirisithi, cela iirisithi. Kwimeko yeembambano, zisenokufuneka. Iihotele ezininzi zinokuhlawulelwa simahla ngaphambi kwexesha eliqikelelweyo, ngokuxhomekeka kubukho. Ukongeza eTshayina, baya kuhlala apho, kodwa baya kufuna intlawulo + 1 ubusuku, lumka. Kwakhona, xa ujongisisa, kufuneka ukuba igumbi libe njengakwifoto xa ubhukisha. Ngamanye amaxesha iz hoteli ziya kumaqhinga ohlukeneyo. Banokubanika inani elingabizi kakhulu kwaye libi ngakumbi kunendlela ohlawule ngayo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, unokuhlala unxibelelana neengcali nge-imeyile okanye ngefowuni. Zive ukhululekile ukubabhalela. Kwi-90% yamatyala, imeko ephikisayo ingasonjululwa. Xa ndandihamba e-Asiya, ndaphawula ukuba amaxabiso egumbi lokubhukisha athembekile kunamaxabiso esasixelelwe ngawo kwihotele xa sicela. Siyintoni isizathu soko? Kodwa inyani ihleli. Ukuba uza nje ucele igumbi, ixabiso labo ngenxa yoko liya kubizwa ngokuba liphezulu kunendawo yokubhukisha. Kwiimeko ezinjalo, ndikucebisa ukuba uqhagamshele kwi-WiFi kwaye ubhukishe igumbi "ngaphandle kokushiya idesika yemali." Ndikunqwenelela ukuphumla okuhle.
Whether you’re looking for hotels, homes, or vacation rentals, you’ll always find the guaranteed best price. Browse our 2,522,303 accommodations in over 85,000 destinations.